Ezona ncwadi ziluncedo
Ukuphefumla nguJames Nestor
Kubonakala ngathi sihlala silinde umntu ukuba asishukumise nzima ezingqondweni ukuze athi: isihogo, usenokuba ulungile! Okumangalisayo kukuba, esona sizathu saziwayo, eyona nyaniso ingenakuphikiswa yile ibonakalisiweyo kuthi ngokucacileyo kokucacileyo. UJames Nestor uthathe ...
Incwadi yakho yokukhuthaza. Hlaziya ngokuzithemba ngokupheleleyo
I-crux yalo mbandela iya kuba kukuba umntu ngamnye wayenombono njengalowo ukhetha iimpahla ntsasa nganye (okanye usuku olungaphambi kwalapho kwimeko yokubona kwangaphambili nokulawula ixesha labo). Kodwa ngokuchanekileyo luhlobo lwe-labyrinths kunye nokujija kwangaphakathi okujika ...
Oko ndafunda incwadi eyaziwayo ka-Allen Carr ngokuyeka ukutshaya, inkolelo yam ekusebenzeni kweencwadi zokuzinceda itshintshe kakhulu yangcono. Imalunga nokufumana le ncwadi ibonelela ukuba i-noséqué yengcebiso phakathi kobuninzi beempikiswano ezivela kumzekelo ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaRafael Santandreu
Iincwadi ezikhangela loo mntu uqinisekileyo zihlala zivusa ukuthandabuza nakwabo babhalisela esi sithuba. Kubonakala ngathi ukuthandabuza kuvela kutoliko lwencwadi yolu hlobo njengongenelelo kwizicwangciso zalo, okanye ukunikezela, umbono wokoyiswa ...
Xa Isiphelo Sikufuphi, nguKathryn Mannix
Ukufa ngumthombo wazo zonke ezo zinto ziphikisayo ezisikhokelela kubukho bethu. Ungasinika njani ukungqinelana okanye ufumane ukuhambelana kwisiseko sobomi ukuba isiphelo sethu siza kutshabalala njengokuphela komdlalo bhanyabhanya? Kulapho ukholo, iinkolelo kunye nokungangeni khona, kodwa se ...
Umdanisi waseAuschwitz, nguEdith Eger
Andihlali ndizithanda kakhulu iincwadi zokuzinceda. Namhlanje okubizwa ngokuba sisandi segurus njengamanyala akudala kum. Kodwa ... (ukwenza okwahlukileyo kuhlala kukuhle ukunqanda ukuwela kwingcinga enye), ezinye iincwadi zokuzinceda ngomzekelo wabo, zihlala zinomdla. Emva koko kuza inkqubo ...
Umyezo Wentliziyo Yakho, nguWalter Dresel
Oko bekusoloko kusithiwa eyona ndlela yokufumana ulonwabo yeyona idlulayo kukwazi ngokwakho. Kuphela, masingazikhohlisi, kumaxesha amaninzi sijamelana nomntu ongagqibi ukususa imaski yendibano, amasiko, imikhwa nayo yonke into ejonge ...